कस्तो छ आज तपाइको भाग्य? हेर्नुस् राशिफल - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो छ आज तपाइको भाग्य? हेर्नुस् राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ )– आज रमाईलो यात्रा रहनेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला ।
वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो )– बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा सफल भईनेछ । लगनशीलताले कामहरू अगाडी बढ्नेछन । प्रेमीको सहयोग पाईनेछ । आत्मिक सन्तुष्टि मिल्नेछ ।
मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा )– नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । धार्मिक यात्राको योगछ ।
कर्कट ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो )– राज्यबाट दण्ड तथा जरिवाना हुँन सक्छ अतः काम गर्दा सजक भएर गर्नुहोला । मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस सोमबार कस्तो वित्दैछ तपाईंको दिन, के छ राशिफलमा ?
सिंह ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे )– शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठाकमाउने बेलाछ । परिवारमा सुख सन्तोष छाउनेछ । स्वादिष्ट भोजन पाईनेछ ।
कन्या ( टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो )– जोश जाँगर र हिम्मत वढ्नेछ । मनोरञ्जनमा सहभागी भइएला । बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । परिवारिक सद्भाव बढ्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस बिहिबार कस्तो बित्दैछ तपाईंको दिन, कस्तो छ राशिफल ?
तुला ( रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते )– आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । दिनको उत्तरार्धमा मन पर्ने व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ ।
वृश्चिक ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु )– अनावश्यक झमेलामा परिएला । अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुनेछ । माया प्रेममा मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । पढाइमा बाधापनि आउनेछ ।
धनु ( ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे )– धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । राज्यबाट सहयोग मिल्नेछ ।
मकर ( भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि )– परोपकारी कार्यमा संलग्न भइनेछ । आत्मबलमा बृद्धि हुनाले सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । प्रेमीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । अतिथिको रूपमा सत्कार पाइएला ।
कुम्भ ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा )– सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । कुटुम्बको सहयोग मिल्नेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ ।
मीन ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि )– आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ला । भ्रमण, खानपान तथा फेसनमा धन खर्च बढ्नेछ ।